Star Trek waxaa markii waxay qurbaha dhulka wax Paramount Pictures.
Star Trek waa xarun warbaahineed oo lagu magacaabo Space America oo ku saleysan taxane telefishanka qiyamka ah oo uu abuuray Gene Roddenberry. Taxanaha ugu horreeya ee telefishinka, oo la yiraahdo Star Trek oo hadda loo yaqaan "The Original Series", ayaa ka soo muuqday 1966 waxaana la duubay seddex xilli xilli shabakadda telefishanka NBC. Waxa ay raacday wada-xaajoodyada kala duwan ee Captain James T. Kirk (William Shatner) iyo shaqaalihiisii ​​oo ku jiray xiddigga USS Enterprise, oo ah markab baadhis meelo, oo ay dhistay Isku-duubnidii Federaalka ee qarnigii saddex iyo soddonaad. Tartanka Star Trek ee xayeysiinta waxaa ka mid ah Heerka Asalka, taxane muuqaal ah, shan sawir oo telefishan ah, filimka filimka, iyo qalabka dheeraadka ah ee warbaahinta.
Marka la abuuro Star Trek, Roddenberry waxa uu dhiirigeliyay buugaagta Horatio Hornblower, buugaagta safarka ah ee Gulliver's Travels, iyo shaqooyinka galbeedka sida Tv-ga Wagon Train. Tartankaas wuxuu sii socday 22-ka kooxood ee Star Trek: Noocyada Muuqaalka ah iyo lix filim oo muuqaal ah. Afar nambar oo taxane ah ayaa la soo saaray: Star Trek: Jiilka Kowaad wuxuu raacay shaqaalihii shirkad cusub oo lagu magacaabo "star starship" tan kale qarnigii koobaad ee asalka ah; Star Trek: Nawaaxiga Deep Deegaanka iyo Star Trek: Voyager ayaa si joogta ah ula qabsaday Generalka Koobaad; iyo Star Trek: Shirkad la dhigo kahor taxanaha asalka ah ee maalmaha hore ee socdaalka bani'aadamnimada ee aadanaha. Dabaqadii ugu dambeysey ee Star Trek TV, oo loogu magacdaray Star Trek: Discovery, ayaa kudheeratay CBS ka dibna ka dib la siiyay si gaar ah oo loogu talagalay moobiilka digital-ka ah ee Gabilsiyada. Hawlgallada Loogu Talagalay Soo-saarayaasha Kooban waxay sii wadeen afar filim oo dheeraad ah. Sannadkii 2009, filimka filimku wuxuu ku dhacay "dib-u-furid" lagu dhigay waqti kale, ama "Kelvin Timeline," oo magaciisu yahay Star Trek. Filimkan ayaa soo bandhigay muuqaal cusub oo muujinaya qaababka yaryar ee shaqaalaha ka yimid bandhigga asalka ah; waxa ay sii wadeen filimkooda, Star Trek Into Darkness (2013). Muuqaalka tobnaad ee filimka iyo soo noqoshada, Star Trek Beyond (2016), ayaa la sii daayay si ay u la socdaan xafladnimada 50-guurada.
Star Trek wuxuu ahaa dhacdo caan ah muddo tobanaan sano ah.  Taageerada fasaxyada waxaa lagu magacaabaa Trekkies ama Trekkers. Farxadku waxay u egtahay noocyo kala duwan oo isboorti ah oo ay ku jiraan ciyaaraha, nambarada, sheekooyinka, ciyaaraha, iyo jilayaasha. Star Trek waxay soo jiidatay indho-indheyn ku taal Las Vegas oo la furay sannadkii 1998-kii waxana la xiray Sebtembar 2008. Ugu yaraan labo bandhig oo matxaf ah ayaa u socdaalaya adduunka. Taxanuhu wuxuu leeyahay luuqad dhisme oo buuxa, Klingon. Qaar ka mid ah jimicsiga ayaa laga sameeyay Star Trek. Intaa waxaa dheer, daawadayaashu waxay soo saareen dhowr farsamo. Laga soo bilaabo July 2016, macaamiilku wuxuu $ 10 bilyan oo dakhli ah ku soo saaray,  sameynta Star Trek mid ka mid ah warbaahinta ugu sarreysa ee waqtiga oo dhan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Trek&oldid=192975"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Juun 2019, marka ee eheed 10:43.